Maxay yihiin saamaynta kuleylka kuleylka ah ee ku shaqeeya qalabka dejiyaha naaftada?
Macna ma laha nooca ay tahay, soo dejiyaha ama soo saaraha naaftada guryaha, howshooda waxaa saameyn ku yeelan doona deegaanka shaqada. Saddexda arrimood ee deegaanka, joogga, heerkulka iyo huurka, waxay si gaar ah saameyn muuqata ugu leeyihiin dejiyaha naaftada: 1.Dhererka. Isticmaalka guud ee naaftada ...
Falanqaynta fashilka iyo xalka cadaadiska saliida mishiinka Diesel wuu hooseeyaa
Falanqaynta Fashilka: A .. Heerka saliida ayaa ku yar saliida saliida. B. Jabka jaangooyaha cadaadiska saliidda; C. Saliida saliida sariirteeda oo saliida ka daadaneysa dheecaanka D. mitirka cadaadiska saliida oo jabay E. Miiraha saliida ee saliida xiraya. Xallinta Dhibaatada A. Ku hayso saliidda saliidda ku jirta miisaan buuxa, waqtigeeda ku dar saliidda B. R ...
Maareynta qolka dhalinta iyo mas'uuliyadda wadaha
Nidaamka maaraynta qolka dhaliyaha naaftada 1. Marka hore, koronto yaqaanku waa inuu u adeegsadaa koronto dhaliyaha si sax ah sida ku xusan qawaaniinta qalliinka, inuu shaqo fiican ka qabto dayactirka koronto-dhaliye sida caadiga ah, samee rikoodh wanaagsan markii gen uu shaqeynayo mar kasta. 2.Hubi dhammaan qaybaha koronto-dhaliye, qaboojiye, shidaalka ...
Aqoonta guud ee koronto dhaliyaha dejisan
Diyaargarowga intaanu cutubku bilaabmin 1. Hubi in heerka saliidda ee saliidda saliidda, heerka qaboojiyaha iyo tirada shidaalka ay ku jiraan qadka miisaanka loo qoondeeyey iyo inta u dhexeysa ee loo qoray. 2, hubi saliida mishiinka naaftada ah, saliidaynta, nidaamka qaboojinta ee dhuumaha kasta iyo wadajirka inay jiraan ...
Shixnad siman oo saameyn ku leh Covid-19
Waxaa saameeyay shirkadda cusub ee 'Covid-19' sanadka 2020, warshadaha kala duwan waxaa la soo kulmay saameyn badan, waxayna noqon doontaa mowjad weyn oo qabow ku ah dhaqaalaha adduunka, ganacsiga iyo isticmaalka qadka. Shanta warshadood ee waaweyn sida cuntada, gaadiidka, dalxiiska iyo guryaha, iyo sidoo kale tafaariiqda qadka ka baxsan, ayaa wajihi doona ...
Bandhigga 2020 Shiinaha Bauma
Bauma China, Shanghai International Construction Makiinado, Qalabka Qalabka Mashiinnada, Mashiinnada Macdanta, Gawaarida Dhismaha iyo Qalabka Expo, waxaa lagu qabtaa labadii sanoba mar Shanghai New International Expo Center. Bauma Shiinaha waa madal bandhig xirfadeed ee Aasiya loogu talagalay warshadaha ...
Shirkadeena waxaa la gudoonsiiyay Shahaadada Shirkadeed ee Tiknoolajiyadda Sare ee Qaranka Bishii Diseembar 2, 2019.
"Sayniska waa xoog wadista gudaha muhiim u ah horumarka, erayga" ganacsi cusub iyo ganacsi sare "waxaa loola jeedaa aasaasiga ah ee aasaasiga ah xuquuqda hantida aqooneed ee lagu sameeyay iyada oo loo marayo cilmi baaris joogto ah iyo horumarin iyo isbadal farsamada ac ...
Ku soo dhawow Madaxweyne ku xigeenka Timor Lest iyo wafdigiisa ayaa booqday shirkadeena
Bishii Sebtember 10, markay soo dhowdahay xafladda-Dayrta-Dhexdeeda, Madaxweyne-ku-xigeenka Timor Lest iyo wafdigiisa ayaa booqday shirkaddayada si ay u darsaan mashruuca tamarta la qaybiyey ee CCHP iyo macaaneynta biyaha iyo kordhinta salaanta ciidda shaqaalahayaga. ...
Bishii Luulyo 2017, shirkadeena waxaa la guddoonsiiyey shahaadada hoggaamineed ee Enterprise ee Fujian Science Science and Technology Giant.
by idaacadda Subaxnimo 17-07-01
Shahaadadani waxay caddaynaysaa in shirkadeennu ay leedahay hawlgal xoog leh iyo koox maarayn, nidaam maaliyadeed oo hagaagsan, adkeysi suuq leh, farsamo dhiirrigelin dabacsan. Waxqabadkuna wuu wanaagsan yahay, wuxuu leeyahay awood horumarineed iyo qiimaha beerashada oo aad u badan. In geeddi-socodka cilmi-baarista, horumarinta ...
Maxay yihiin saamaynta temperatu ku xeeran ...